Shingrix vs Zostavax: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार औषधि जानकारी, समाचार मनोरञ्जन औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Shingrix vs Zostavax: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Shingrix vs Zostavax: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
त्यहाँ हाल दुईवटा खोपहरू छन् जुन हर्पेस जोस्टरलाई रोक्न दिन सकिन्छ, जसलाई सामान्यतया शिंगलहरू भनेर चिनिन्छ: शिंग्रिक्स र जोस्ट्याभ्याक्स। वयस्कहरूको लागि एक शिंगल खोप सिफारिस गरिन्छ जब उनीहरू 50० वर्षको हुन्छन्।
धेरै व्यक्ति भेरिसेला zoster भाइरसले संक्रमित भएको छ यदि तिनीहरूसँग कहिल्यै चिकनपक्स छ भने। चिकनपॉक्स समाधान भएपछि भेरिसेला जोस्टर भाइरस शरीरमा वर्षौंसम्म सुस्त रहन्छ, यदि सदाका लागि होइन भने। पछि जीवनमा, भाइरस दादाको रूपमा पुन: सक्रिय हुन सक्छ र सामान्य रूपमा अनुहार वा धड वरिपरि लपेट्ने दर्दनाक दाग हुन सक्छ।
यद्यपि Shingrix र Zostavax समान तरीकाले दाद रोक्नको लागि काम गर्दछ, त्यहाँ दुई बीच केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्।
शिंग्रिक्स र जोस्ट्याभ्याक्स बीचको मुख्य भिन्नताहरू के हुन्?
शिंग्रिक्स (शिंग्रिक्स भनेको के हो?) एक पुनः संयोजक, समायोजित जोस्टर भ्याक्सिन हो जुन २०१ F मा पहिलो एफडीए-अनुमोदित भएको थियो। यसले शरीरमा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पादन गर्न भेरिसेला-ज़ोस्टर ग्लाइकोप्रोटीन ई एन्टिजेन प्रयोग गर्दछ। एक सहायक, वा थपिएको घटक, भाइरसको लागि शरीरको प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढाउन मद्दत गर्दछ। किनभने शिंग्रिक्स एक निषेधित खोप हो, यो इम्युनोकोम्पराइज्ड बिरामीहरू वा कमजोर प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Shingrix मांसपेशि मा एक इंजेक्शन को रूप मा प्रशासित छ (इंट्रामस्क्युलर)। यो एक अवधि संग दुई अलग खुराकमा दिइन्छ दुई देखि छ महिना बिचमा। दोस्रो खुराक लामो अवधिको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
२००ost मा स्वीकृत Zostavax, एक जीवित attenuated हर्पेस zoster खोप हो। अर्को शब्दहरूमा, Zostavax एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पादन गर्न वास्तविक भाइरस को एक कमजोर संस्करण समावेश गर्दछ। यस कारणका लागि, यो प्रतिरक्षाको लागि सिफारिस गरिएको छैन। वा अन्यथा खोपले पनि संक्रमण निम्त्याउन सक्छ।
अमेरिकी मा कति मानिसहरु मोटो छन्
Zostavax छाला (subcutaneous) तल एकल इंजेक्शनको रूपमा प्रशासित छ। यो एक मा आउँछ स्थिर संस्करण र ए फ्रिज-स्थिर संस्करण । स्थिर प्रभाव यातायात र भण्डारणको समयमा स्थिर राख्नु पर्छ यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि रेफ्रिजरेटर-स्थिर Zostavax एक रेफ्रिजरेटरमा राख्न सकिन्छ जबसम्म यो प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन।
Shingrix र Zostavax बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग खोप खोप
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड नाम मात्र ब्रान्ड नाम मात्र
जेनेरिक नाम के हो? Zoster Vaccine Recombinant, Adjuvanted Zoster खोप लाइभ
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शनको लागि निलम्बन Subcutaneous इंजेक्शन को लागी निलम्बन
मानक खुराक के हो? १ खुराक (०. 0.5 मिलि) र अर्को २ (m.० मिली) २ र months महिना पछि व्यवस्थापन गर्नुहोस् एकचोटि एक खुराक (०..65 मि.लि.) प्रशासन गर्नुहोस्
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? खोपहरू २ खुराक पछि २ देखि months महिनामा पूर्ण हुन्छ खोप एक खुराक पछि पूरा भयो
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क 50० बर्ष र माथिका वयस्क 50० बर्ष र माथिका
सर्त Shingrix र Zostavax द्वारा उपचार
शिंग्रिक्स र जोस्ट्याभ्याक्स शिंगलहरू (हर्पेस जोस्टर) लाई रोक्न एफडीए अनुमोदित छन्। दुबै खोपहरू 50० बर्ष उमेर र अधिक उमेरका वयस्कहरूमा दाing रोक्नको लागि संकेत गरीन्छ। Shingrix र Zostavax प्राथमिक भेरीला संक्रमण रोक्नको लागि प्रयोग गरिदैन, चिकनपॉक्स पनि भनिन्छ।
पोस्टहेर्पेटिक न्यूरल्जिया एक साधारण प्रकारको स्नायु दुखाइ हो जुन दादका साथ उत्पन्न हुन्छ। किनभने शिंग्रिक्स र जोस्ट्याभ्याक्सले दादुरालाई रोक्न सक्छ, तिनीहरूले पोस्टहर्पेटीक न्यूरलगिया (पीएचएन) र दाँतबाट अन्य दर्दनाक जटिलताहरूलाई पनि रोक्न सक्छ। यद्यपि यी खोपहरू पीएचएन उपचार गर्नको लागि लेबल गरिएका छैनन्।
सर्त शिंग्रिक्स Zostavax
हर्पेस zoster को रोकथाम (दाद) हो हो
के शिंग्रिक्स वा Zostavax अधिक प्रभावी छ?
Shingrix र Zostavax दुबै दाद रोक्न को लागी साबित गरीएको छ। यद्यपि शिंग्रिक्स एक नयाँ खोप हो जुन Zostavax भन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। विगतमा जोस्ट्याभ्याक्स खोप लिइसकेका मानिसहरूलाई पनि शिंग्रिक्स सिफारिस गरिएको छ।
क्लिनिकल परीक्षणहरूले देखाए कि शिंग्रिक्स छ %%% प्रभावकारी to० देखि years years वर्ष उमेरका वयस्कहरूमा दाद रोक्न। शिंग्रिक्स वयस्क वयस्कहरूमा दाद रोक्न पनि प्रभावकारी छ — वयस्कहरू 70० बर्ष भन्दा माथिका शिंग्रिक्स हो % १% प्रभावकारी ।
Zostavax एक छ %०% प्रभावकारिता Zoster दक्षता र सुरक्षा परीक्षण (ZEST) को अनुसार, to० देखि years years वर्ष उमेरका वयस्कहरूमा दाद रोक्न मा दर। बाट परिणामहरू दाद रोकथाम अध्ययन देखाईयो कि Zostavax दादहरु को विरुद्ध 51% प्रभावी छ। शिंग्रिक्सको तुलनामा, जोस्टाभ्याक्सको प्रभावकारिता वृद्ध उमेर समूहहरूमा घट्छ। एसपीएस परिणाममा आधारित, जोस्ट्याभ्याक्स 60० देखि years years वर्ष उमेरका वयस्कहरूमा% 64% प्रभावी छ; To०% ० बर्ष उमेरका वयस्कहरूमा प्रभावकारी; र %० बर्ष वा माथि उमेरका वयस्कहरूमा १ 18% प्रभावकारी।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले संभवत: Zostavax मा Shingrix सिफारिश गर्दछ। शिंग्रिक्स विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक बिरामीहरूको लागि सिफारिश गरिन्छ किनकि यो एक गैर-जीवित खोप हो। तपाईको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् कुन दादुरा खोप तपाईको लागि उपयुक्त छ।
कभरेज र शिंग्रिक्स बनाम Zostavax को लागत तुलना
Years० बर्ष वा माथिका वयस्कहरूको लागि मात्र योजनाहरू मेडिकेयर भाग डी कभरेजको साथ Shingrix खोप कभर हुनेछ। जहाँसम्म, मेडिकेयर पार्ट डी कभरेजको साथ पनी एक प्रतिलिपि पनि हुन सक्छ। एक शिंग्रिक्स डोजको लागि औसत नगद मूल्य $ १ is7 छ, यद्यपि तपाईं यस लागत कम गर्न प्रिस्क्रिप्शन डिस्काउंट कार्ड प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंको शिंग्रिक्स सिंगलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कि भनेर हेर्नको लागि तपाईंको स्थानीय फार्मेसीको साथ जाँच गर्नुहोस्।
शिंग्रिक्स जस्तै, Zostavax मुख्य रूप से मेडिकेयर भाग डी योजनाहरू या मेडिकेयर एडवांटेज योजनाहरू मेडिकेयर पार्ट डी कभरेजको साथ कभर हुन्छ। बीमाको साथ Zostavax को प्रतिलिपि फरक हुन सक्छ। Cash २88 को औसत नगद मूल्यको साथ, Zostavax बीमाको साथ वा बिना महँगो हुन सक्छ। Zostavax को लागी एक प्रिस्क्रिप्शन डिस्काउंट कार्ड प्रयोग गर्नाले यस लागत लाई कम गर्न सक्षम हुन सक्छ।
मानक खुराक १ इंजेक्शन (०. m मिलि) र त्यसपछि अर्को इन्जेक्शन (०. 0.5 मिलि) २ देखि months महिना पछि १ एकल डोज इंजेक्शन (०..65 मिली)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०– $ १44 $ ०– $ २7।
एकलकेयर लागत $ १55 + N / A
Shingrix vs Zostavax का सामान्य साइड इफेक्टहरू
Shingrix र Zostavax को सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्ट इंजेक्शनको साइटमा प्रतिक्रिया सामेल गर्दछ। एक शिंग्रिक्स वा Zostavax इंजेक्शन पछि, तपाइँ पीडा, रातोपन, वा इंजेक्शन साइट वरिपरि सूजन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पनि इंजेक्शन क्षेत्र वरिपरि घाउ वा खुजली महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
Zostavax को तुलनामा, Shingrix अधिक प्रणालीगत प्रतिक्रिया जस्तै सिरदर्द, ज्वरो, मांसपेशी दुख्ने (myalgia), र थकान रिपोर्ट गरिएको छ। जबकि यी साइड इफेक्टहरू कष्टप्रद हुन सक्छन्, तिनीहरू सामान्य रूपमा हल्का हुन्छन् र आफ्नै रूपमा हराउँछन्।
इंजेक्शनको साइटमा लालिमापन हो %%% हो % 36%
इंजेक्शनको साइटमा दुखाई हो % 86% हो 4%
इंजेक्शनको साइटमा सूजन हो २%% हो २%%
इंजेक्शनको साइटमा खुजली हो दुई% हो %%
टाउको दुखाई हो चार। पाँच% हो १%
ज्वरो हो २%% हो दुई%
मांसपेशी दुख्ने हो % 53% हैन *
थकान हो %१% हैन *
मुहान: डेलीमेड (शिंग्रिक्स) , डेलीमेड (Zostavax)
Shingrix बनाम Zostavax को ड्रग अन्तर्क्रिया
इम्युनोस्प्रेसिभ औषधिहरू जस्तै साइक्लोस्पोरिन र ट्याक्रोलिमसले खोपहरूको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछ। स्टेरोइड्स, जस्तै प्रेडनिसोन, र केमोथेरापीमा पनि इम्युनोसप्रेसिभ प्रभाव हुन सक्छ जसले खोपहरू कसरी काम गर्दछ भन्नेमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
जो इम्युनोसप्रेसिभ थेरापीमा छन् उनीहरूले Zostavax लाई पूर्ण रूपमा जोगिनु पर्छ; Zostavax लाइभ भाइरस, जो एक संक्रमण को परिणाम मा हुन सक्छ।
एन्टिवायरल औषधिहरू जस्तै एसाइक्लोभिर र परिवारिक्लोभिरले Zostavax खोपको प्रभावमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। खोप प्रविधि (एसीआईपी) को सल्लाहकार समितिले सिफारिस गर्दछ कि एन्टिवाइरल ड्रग्समा रहेका व्यक्तिले एन्टिवाइरल औषधि सेवन रोक्नुहोस्। २ hours घण्टा अघि एक Zostavax खोप लिने। एन्टीवायरल ड्रग्सको साथ उपचार Zostavax खोप पछि कम्तिमा 14 दिन को लागी शुरू गर्नु हुँदैन।
औषधि ड्रग क्लास शिंग्रिक्स Zostavax
केमोथेरापी इम्युनोसप्रप्रेसिभ उपचारहरू हो हो
Famciclovir एन्टिवाइरल एजेन्टहरू हैन हो
Shingrix र Zostavax को चेतावनी
Shingrix र Zostavax खोप अवयवहरूसँग एलर्जी भएकाहरूमा अतिसंवेदनशीलता, वा एलर्जीको कारण हुन सक्छ। ज़ोस्टाभाक्सले जिलेटिन वा नियोमाइसिनमा ज्ञात एलर्जी भएकाहरूमा गम्भीर एलर्जीको कारण हुन सक्छ। गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियाहरूले गम्भीर दाग र सास फेर्न समस्या बनाउन सक्छ (एनाफिलैक्सिस)।
जो प्रतिरोधात्मक क्षमता एजेंट लिने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्ने चिकित्सा अवस्थाबाट प्रभावित हुनेहरूमा जोस्ट्याभ्याक्सलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।
दाद खोप लगाउनु अघि अन्य सावधानीहरूको बारेमा तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्।
Shingrix बनाम Zostavax बारे प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
शिंग्रिक्स भनेको के हो?
शिंग्रिक्स एक हो पुनः संयोजक खोप pes० बर्ष वा माथिका वयस्कहरूमा हर्पेस जोस्टर, वा दाद रोक्नको लागि प्रयोग गरियो। २०१ 2017 मा स्वीकृत भयो, शिंग्रिक्स एक निष्क्रिय खोप हो जसमा लाइभ भेरिसेला-ज़ोस्टर भाइरस समावेश हुँदैन। यो पहिलो खुराक र दोस्रो खुराकको बिचमा दुईदेखि छ महिनासम्म दुई खुराकमा प्रशासित हुन्छ। Shingrix GlaxoSmithKline द्वारा निर्मित छ।
Zostavax के हो?
जोस्ट्याभ्याक्स एक लाइभ एटेन्युएटेड जोस्टर भ्याक्सिन हो जुन एफडीए २०० 2006 मा स्वीकृत भएको थियो। लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनको रूपमा, जोस्ट्याभ्याक्सले भेरिसेला-जोस्टर भाइरसको एक जीवित, कमजोर संस्करण समावेश गर्दछ। Ost० बर्ष वा बढी उमेरका वयस्कहरूमा Zostavax एक डोजमा प्रशासित हुन्छ। यो मर्क द्वारा निर्मित छ।
के शिंग्रिक्स र जोस्ट्याभ्याक्स एकै हो?
दुबै शिंग्रिक्स र Zostavax दादहरूको जोखिम कम गर्न सक्छ। जे होस्, ती प्रभावकारिता, प्रशासन, र साइड इफेक्टमा फरक छन्। शिंग्रिक्स एक पुनः संयोजक zoster खोप हो र Zostavax एक प्रत्यक्ष खोप हो। अर्थ, शिंग्रिक्सले भेरिसेला - जोस्टर भाइरसको एक निष्क्रिय फार्म समावेश गर्दछ र Zostavax भाइरसको एक प्रत्यक्ष, कमजोर फार्म समावेश गर्दछ। अर्को भिन्नता भनेको शिंग्रिक्स मांसपेशीमा इन्जेक्सन गरिएको छ, जबकि Zostavax छालाको तल इंजेक्सन गरिएको छ। Zostavax को तुलनामा, Shingrix एक नयाँ shingles खोप हो।
के शिंग्रिक्स वा जोस्ट्याभ्याक्स राम्रो छ?
Shingrix Zostavax भन्दा अधिक प्रभावी छ। शिंग्रिक्स% to देखि years years वर्ष उमेरका वयस्कहरूमा दाद रोक्नको लागि% effective% प्रभावी छ जबकि Zostavax समान उमेर समूहमा दाद रोक्नमा 70०% मात्र प्रभावकारी छ। शिंग्रिक्स लगातार वृद्ध वयस्कहरूमा दादा रोक्छ जब कि Zostavax को प्रभावकारिता बढ्दो उमेरसँगै घट्छ। यद्यपि, शिंग्रिक्सको Zostavax भन्दा बढी प्रणालीगत साइड इफेक्ट छन्।
के म गर्भवती हुँदा शिंग्रिक्स वा जोस्ट्याभ्याक्स प्रयोग गर्न सक्छु?
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरू (CDC) गर्भवती महिलाहरूमा Shingrix वा Zostavax सिफारिश गर्दैन। त्यहाँ निर्धारित गर्न पर्याप्त अध्ययन छैन Shingrix को सुरक्षा वा गर्भवती महिलाहरूमा Zostavax । दाद खोप लगाउनु अघि तपाईंको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म Shingrix वा Zostavax रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सी पिउँदा शिंग्रिक्स वा Zostavax को प्रभावकारिता परिवर्तन हुँदैन। दाing्गको खोप लगाए पछि सामान्य रूपमा पिउँदा सुरक्षित हुन्छ।
शिंग्रिक्स खोप कति लामो हुन्छ?
क्लिनिकल परीक्षणहरूले देखायो कि शिंग्रिक्स कम्तिमा चार बर्ष सम्म प्रभावकारी रहन्छ दोस्रो खुराक पछि। यो सुझाव दिइन्छ कि शिंग्रिक्स त्यो भन्दा पनि लामो समय सम्म रहन्छ। अझै, शिंग्रिक्स दीर्घकालीन प्रभावकारितामा थप अध्ययनहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
Zostavax कहिलेसम्म प्रभावी छ?
दादबाट सुरक्षा वरिपरि रहन्छ Zostavax साथ खोप पछि पाँच वर्ष । पाँच बर्ष पछि, Zostavax को प्रभावकारिता समयको साथ घट्न सक्छ। सीडीसीले नयाँ शिंगल खोप, शिंग्रिक्स प्राप्त गर्ने सिफारिस गर्दछ, यदि तपाईंले विगतमा Zostavax खोप प्राप्त गरिसक्नुभयो भने।
यदि तपाईंले दोस्रो शिंग्रिक्स शट प्राप्त गर्नुभएन भने के हुन्छ?
खोपबाट पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दोस्रो शिंग्रिक्स शट महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि तपाईंले बुस्टर शट प्राप्त गर्नुभन्दा अघि six महिना भन्दा बढी बितिसकेको छ भने तपाईंले चिन्ता लिन आवश्यक पर्दैन। केवल यकीन गर्नुहोस् कि तपाईंले दोस्रो शट सकेसम्म दुई देखि छ महिनाको समयसीमाको जति सक्दो सम्भव भयो।
एक मूत्र पथ संक्रमण को लागी प्राकृतिक उपचार
जब nexplanon प्रत्यारोपण प्रभावी हुन्छ
कसरी घर मा छिटो न nail कवक को छुटकारा पाउन
खमीर संक्रमण को उपचार को लागी नारियल तेल को उपयोग
म कम पोटेशियम को लागी के लिन सक्छु?